बालक निशान खड्काको हत्या प्रकरण : गोलीको जवाफ ढुंगाले दिन सकिदैन, गोली नै चाहिन्छ : डिआइजी न्यौपाने(अन्तरवार्ता) – Nepali Profile
बालक निशान खड्काको हत्या प्रकरण : गोलीको जवाफ ढुंगाले दिन सकिदैन, गोली नै चाहिन्छ : डिआइजी न्यौपाने(अन्तरवार्ता)
निशान खड्का हत्याबारे अहिलेसम्मको तथ्य के हो ? यो घटना अनुसन्धानकै प्रक्रियामा छ । अनुसन्धान सकिएपछि विस्तृत विवरण आउने नै छ ।
तर नेपाल प्रहरीले खड्कालाई जिवितै उद्दार गर्न सकेन नि ? घटनबारे प्रहरीलाई जानकारी हुनासाथ तत्कालै अनुसन्धान सुरु गरिएको थियो । तर अफसोच, दुःखका साथ बालक मृत अवस्थामा फेला परे ।
तपाइहरुको खोजतलास त कमजोर देखियो नि ? हामीलाई जानकारी आउनासाथ खोजतलास सुरु गरिएको हो । खोजतलास कमजोर भएको होइन ।
अपहरणकारी कसरी मारिए ? अपहरणकारी दोहोरो भिडन्तमा मारिएका हुन् । पाइलटबाबाको आश्रम छेउमा पुग्दा अपराधिक समुहबाट फायर भयो । त्यसपछि प्रहरीले आत्मरक्षाका लागि फायर गर्दा २ जना मारिएका हुन् । गोलीको जवाफ ढुंगाले दिन सकिदैन । गोली नै चाहिन्छ । प्रहरीमाथि कोही जाइलाग्छ भने प्रहरीले जवाफी फायरिङ गर्नैपर्ने हुन्छ ।
यस्ता अपराधिक घटना नियन्त्रण गर्न प्रहरी असफल भएको हो ? नेपाल प्रहरी सक्षम छ । तर यदाकदा यस्ता घटना घटेका छन् । अधिकांश घटनामा नेपाल प्रहरी सफल भएको छ ।
कस्तो अवस्थामा प्रहरीको भूमिका कमजोर हुन्छ ? मुख्य कुरा त कुनै पनि घटनाबारे समयमा नै प्रहरीलाई जानकारी भयो कि भएन भन्ने कुरा हो । ढिलो गरी जानकारी प्राप्त हुँदा समस्या हुन्छ ।
जानकारी ढिला आउनुको कारण के हुन सक्छ ? बाल बच्चा हराए भने पहिला आफैँ खोज्ने गरिन्छ । घर वरपर, साथीभाइ कतै गएको होला भन्ने लाग्छ । जब धेरै समयसम्म बच्चा फेला पर्दैन, त्यसपछि मात्रै प्रहरीलाई जानकारी गराइन्छ । सही समयमा सही सुचना प्राप्त भयो भने नेपाल प्रहरी सफल हुन्छ ।
अपराध नियन्त्रणका लागि जनता र प्रहरीबीचको सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्छ ? नेपाल प्रहरीको अहिलेको मुख्य नीति नै जनसहभागितामुलक, नागरिकहरुसँग हातेमालो गरेर, टोलटोलमा प्रहरी गएर काम गर्ने हो । जुनसुकै अपराधि पनि समाजमै बस्ने गरेको छ । त्यसैले समाजको सहयोग प्रहरीलाई चाहिन्छ । पछिल्लो समय नागरिकबाट पनि अपराधिक क्रियाकलाप रोक्नका लागि धेरै सहयोग भइरहेको छ ।
तर समाजमा अपराधका घटना त भइरहेका छन् नि ? नागरिकले यसरी नै प्रहरीलाई सहयोग गर्ने हो भने अब टोलटोलबाट अपराधीहरु थुतिन्छन् ।